â Manawphyu wroteamessage for you
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ:
Manawphyu left youaprivate message
Manawphyu left youamessage. Click on the button below to read it:
This message is sent on behalf of Manawphyu Lay.
Zorpia Co. Ltd. P.O. Box #28960, Gloucester Road Post Office, Hong Kong
ရွှေမြန်မာရဲ့ ဒဿ န
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ဗဟုသုတ, မျှဝေခြင်း
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်အရှုံးပေးမှ ရှုံးတာပါ
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ကဗျာ, ဗဟုသုတ
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ဓါတ်ပုံ
လုပ်ငန်းတွင်း အောင်မြင်စေရန် တီထွင်ဖန်တီးခြင်း
ယနေ့ခေတ် ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာကြီး၏ နောက်ကောက်မကျန်ခဲ့ရန်
ကျွန်မတို့လည်း အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ကြရပါမယ်။ အပြိုင်အဆိုင် ပေါများသော
လောကတွင် စီးပွားရေးကဏ္ဍသည် ခြေလှမ်းသွက်ရန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်
လိုက်လံညှိတတ်ဖို့ အများဆုံးလိုအပ်သည့်ကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော
ကမ္ဘာကြီး၌ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအသစ်များဖြင့် ထွင်ဥာဏ်ရှိနေနိုင်မှသာ သင်ရဲ့
လုပ်ငန်းမြဲမြံမှာ ဖြစ်ပေသည်။ ခြေတစ်လှမ်းသာနေသောသူများသာ အောင်နိုင်ရာ၏။
အရင်ဆုံး စဉ်းစားဖို့ လိုလာတာကတော့ သင်သည် အဘယ်အတွက်ကြောင့်
တီထွင်ကြံဆတတ်ရမည်နည်းဆိုတာကိုပါပဲ။ ပထမ အဆင့်အနေဖြင့် သာမန်ကာလျှံကာ
စိတ်ထား ထားရှိခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ရန်၊ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် နာတစ်ဖျားသာ
နေဖို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် လောကကြီးက
မပြတ်ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသောကြောင့်လားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ လာလိုပါပြီ။
ကျွန်မတို့သည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်ရော ပြည်ပမှာပါ ဈေးကွက်ကို
ဦးဆောင်သူများ ဖြစ်နေရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်မတို့သာ
ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူ မဟုတ်ခဲ့ရင် ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူများရဲ့
ချယ်လှယ်စိုးမိုးခြင်းကို အမှန်တကယ် ခံကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
တီထွင်ကြံဆခြင်းသည် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခက်အခဲ ပြဿနာ ဖုထုံး ရှိလာလျှင်
ပြန်ဖြည့်ဖို့ နည်းလမ်းရှာရစမြဲဖြစ်သည်။ တီထွင်ကြံဆခြင်းသည်
ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တီထွင်ဖန်တီးတတ်သောသူများတွင် ထူးခြားသော
ပါရမီနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှိသည်ဟု ကျွန်မတို့ တွေးထင်တတ်ကြပါသည်။
အချို့အတွက်သည် မှန်သော်ငြားလည်း များသောအားဖြင့် ကျွန်မတို့
ကြိုးစားအားထုတ်၍ ရနိုင်ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းတွင်း အဆင်မပြေမှု
နည်းလမ်းသစ်များအားဖြင့်သာ ထိုပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်
ကြိုးစားကြရမည်။ တီထွင်ကြံဆခြင်းသည် အသိဥာဏ် ဗဟုသုတထက်သာ၍ အရေးကြီးပါသည်။
ပါရမီရှင် တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ပြင်ပမှ တွန်းပို့အားသည် ၁၀
ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကျန် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကိုယ်တိုင် ခံယူချက်များ
သုံးခြင်းတို့ ရှိဖို့လိုအပ်လှပါသည်လို့ အဲလ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းက ပြောပါသည်။
တကယ်လို့သာ သင့်ထံမှာ စိတ်ကူးအသစ်များ တောက်လျှောက်ရှိနေခြင်းအပေါ်
စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ လွယ်ကူသော ကိစ္စမဟုတ်သဖြင့် လူအတော်များများသည်
အချိန်ယူကာ ပြုလုပ်ကြရပါမည်။ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူးရှိရန်နှင့်
တီထွင်ကြံဆတတ်ရန်သည် လွယ်ကူသော အလုပ်မဟုတ်ပေ။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်
အချိန် ယူကာ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ ဘာတွေကို
သင်ယူရရှိရမည်နည်း။ တီထွင် ကြံဆခြင်းသည် ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ကာ
ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုကြရ၏။ ၎င်းကို ကြွက်သားများကဲ့သို့ပင်
ကြီးထွားရှင်သန်လာ အောင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ယူရမည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့အားဖြင့် ပို၍ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ ပြဿနာ အဖုအထစ်လေးများကို
ပြန်ဖြည်ဖို့ ဖန်တီးရောစပ်ထားသော နည်းလမ်းများကို သုံးရမည်။ ထို့နောက်
အခက်အခဲ ပြဿနာများ၊ နည်းလမ်းအဖြေများအတွက် သဲလွန်စများကို ရနိုင်သလောက်
အချက်အလက်များ၊ သတင်းအစအနများကို မွှေနှောက်ကာ ပေါ်ပေါက်လာသည့်
အမှားများအတွက် အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်များကို မေးခွန်းထုတ်ပါ။
စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရနိုင်သလောက် ညှစ်ထုတ်ပါ။ အလားအလာကောင်းသော၊
အဖြေနှင့် နီးစပ်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
အခြားသောသူများထံမှ အကြံဥာဏ်များလည်း တတ်နိုင်သလောက်
တောင်းယူနိုင်ပါသေးတယ်။ စိတ်ကူး သစ်များ ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အကြီးအကျယ်
စဉ်းစားတွေးတောပြီးနောက် အကြောင်းအရာများကား တစ်ခုနှင့် တစ်ခု
ဆက်စပ်လာပြီး အဖြေထုတ်ပေးနိုင်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ရလာပါလိမ့်မည်။
ဤကဲ့သို့သော ပြဿနာများ၏အဖြေများသည် သင် မျှော်လင့်မထားတော့သည့်အချိန်၊
ပြဿနာအကြောင်းကို တွေးတော မနေသည့်အချိန်မျိုး၌ ပေါ်လာတတ်သည်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ များသောအားဖြင့် စိတ်ကူးအသစ်များသည်
သင်အနားယူနေသည့်အချိန်၊ စိတ်အပန်းဖြေနေသည့်အချိန်၊ ပြဿနာရပ်အကြောင်းကို
မတွေးတောဘဲ နေသည့်အချိန်၊ ရေချိုးနေချိန်၊ အနားယူပြီးချိန် စသည်တို့၌
ဤနည်းလမ်းသည်လည်း သင်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်အသီးသီးနှင့် သင်ယူတတ်မြောက်ထားသော
အတတ်ပညာတို့ကို တွဲသုံးကာ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်
ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် စိတ်ကူးအကြံအစည် အကြမ်းများကို သင့်တော်သော
ကျွန်မတို့သည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာ၌ မိမိကိုယ်ကို ကန့်သတ်ကာ
အခြားတစ်နည်းကို သုံးဖို့ အားမထုတ်လိုကြချေ။ တစ်နည်းပြောရရင်
လမ်းဟောင်းအတိုင်း နည်းဟောင်းအတိုင်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါသည်။
ရလဒ်အသစ်များရလာရန် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများနှင့် နည်းလမ်းအသစ်များကို
သုံးဝံ့ရမည်။ အမှန်တကယ်တော့ နည်းလမ်းဟောင်းကြီးများက အဖြေအသစ်ပေးခဲသည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် မဆိုင်းမတွပင် ထလုပ်တတ်သူများအတွက် အဖြေအသစ်ရရှိရန်
မခဲယဉ်းပေ။ တစ်ခါတလေ စည်းဝိုင်းအတွင်းမှာမနေပဲ စည်းဝိုင်းပြင်ပအထိပါ
ထည့်စဉ်းစားတတ်ရမည်။ များများသင်ယူကာ စိတ်ကူးသစ်များ၊ နည်းလမ်းသစ်များ၊
လူအများနှင့် များများထိတွေ့လေလေ၊ သင့်အတွက်
စိတ်ကူးအသစ်များများရရှိဖို့ရန် လွယ်ကူလေလေ ဖြစ်ပါသည်။ နံရံကို
၀င်မဆောင့်ပါနှင့်။ ကွေ့ပတ်သွားပါ။ သင်ပြုလုပ်နေသည့်အရာများကို
အပြောင်းအလဲ လုပ်ကာ သဟဇာတဖြစ်အောင် ညှိပြီး ပြုလုပ်သွားပါ။
ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါသည်။ "တီထွင်ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများက"။
လမ်းဟောင်းကြီးများက ကောင်းစွာ အသုံးမ၀င်တော့လျှင် လမ်းသစ်ရှာရပါမည်။
တီထွင် ဖန်တီးမှုများ၊ စမ်းသပ်မှုများမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။
တီထွင်ဖန်တီးမှုကို တွန်းအားပေးသော အရာများကတော့ အမှီအခိုကင်းလိုမှုနှင့်
စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လေ့လာစူးစမ်းမှုနှင့် အခက်အခဲ ပြဿနာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်တီထွင် ဖန်တီးလိုမှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးသော အရာများကလည်း ရှိပြန်သေးသည်။
အသစ်အဆန်းမှန်သမျှကို ငြင်းဆန်မှုနှင့် မိမိ၏ဖြစ်အင်ကို ကျေနပ်
တင်းတိမ်နေမှုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲလုပ်ရင် နာကျင်သည်။ ပေးဆပ်ရသည်၊
သက်တောင့် သက်သာ မရှိ၊ အန္တရာယ်များကာ ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးနိုင်သည့်အပြင်
လူ့သဘောသဘာဝအရ အပြောင်းအလဲ မလုပ်လို ကြပေ။ သို့ရာတွင် လမ်းသစ်များကသာ
စိတ်ကူးအသစ်များကို ပေးစွမ်းပါလိမ့်မည်။ လမ်းဟောင်းကြီး များက
ရလဒ်အဟောင်းများကိုသာ ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကိုသာ
ကျေနပ်တင်းတိမ်နေခြင်းသည် လမ်းသစ်ထွင်ရန် လုံလောက်သော တွန်းအားကို
မပေါ်ပေါက်စေပါ။ ဒါကြောင့် တိုးချဲ့ဖို့၊ တိုးတက်ဖို့ ဆန္ဒ မရှိရင်လည်း
ပြည့်မည် မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လမ်းစရှာတတ်ရပါမည်။
တီထွင်ဖန်တီးခြင်းဟုဆိုရာ၌ အကောင်းဆုံး စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို
ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ သင်ကိုယ်တိုင်၌လည်း
စိတ်ကူးစိတ်သန်းမြောက်မြားစွာ ရရှိစေပါသည်။ များပြားလှစွာ သော
စိတ်ကူးယဉ်မှုများ ပြုလုပ်ထားပါ။ စိတ်ကူးသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာသည့်
နောက်တွင် ကောင်းသော စိတ်ကူးပေါင်းများစွာ ထပ်မံ လိုက်ပါလာမည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ
သင်လည်း သင့်ရာကို ရွေးချယ်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။ သင့်စိတ်ကူးများကို
အများကပင် လက်မခံနိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိနေရင်လည်း စိတ်မပူပါနှင့်။
သင့်လုပ်ငန်းကို တိုးတက်စေမည့် စိတ်ကူးများ ဖြစ်လာမည်ကို မကြာမီ
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးက လျင်မြန်သွက်လက်သောနှုန်းနဲ့ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ နည်းပညာနယ်ပယ်က ပိုပြီး လွန်စွာမှပင် အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်။ တိုးတက်မှုကလည်း မြင့်မားလာနေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆိုတာကလည်း နည်းပညာ တိုးတက်မြင့်မားလာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ယနေ့ လူတိုင်း နီးပါးက ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနေပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ် နေထိုင်မှုစနစ်တွေကလည်း ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာယဉ်ကျေးမှုလို့ ခေါ်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေခဲ့ပါပြီ။ ယခုဆိုရင်လည်း ကွန်ပျူတာအရောင်းပွဲတွေကို ကြိုကြားကြိုကြား ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ လူတိုင်း အသုံးပြုနိုင် သော ခေတ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
လူငယ်တိုင်းကလည်း ကွန်ပျူတာမရှိရင် ခေတ်မမှီတော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မိဘများကို ပူဆာလာကြတာလည်း တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဘာအတွက်သုံးမလဲဆိုတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှ မဖြေနိုင်ကြ ပါဘူး။ နယ်တွင် မပြောနဲ့ မြို့ပေါ်မှာတောင် ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘာလဲမေးရင် chat လို့ရတယ်ပဲ သိတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ နည်းပညာ တိုးတက်လာသလောက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ အမြင်များလည်း ပြောင်းလဲဖို့ အရမ်း လိုအပ်လာနေပါပြီ။ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘာမှန်းသာ မသိကြတာ ကွန်ပျူတာသင်ပြီဆိုတာနဲ့ Gtalk ပြောဖို့နဲ့ facebook အကောင့် မရှိသေးဘူးလို့ ပြောတဲ့သူချည်းပါပဲ။ ယခုတစ်လော ရေပန်းစားနေတဲ့ ဒီ Social Network လို့ လူတိုင်းလိုလို အရူးအမူးဖြစ်နေတဲ့ facebook ကြီးက အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှာ ပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်နေခဲ့ပါရောလား။ တကယ်လို့သာ facebook ပဲ သုံးနေကြတဲ့လူတွေ ဒီဆိုက်သာ ပိတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို သုံးကြမလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေ တွေးနေမိပါတော့တယ်။ တစ်ချို့က facebook သုံးမှ ခေတ်မီတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကတော့ လူတိုင်းလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တွေ့တာနဲ့ facebook မှာ မင်း ဘော်ဒါ ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲ။ မင်းမိတ်ဆွေက ငါထက်နည်းသေးတယ်ဆိုပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေတောင် ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ အတော်များများ လူတွေရဲ့ အမြင်က အင်တာနက်သုံးတာ facebook ကိုပဲ သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက အတော်ကို လွှမ်းမိုးထားတာ တွေ့ရတယ်။ facebook မသုံးတဲ့သူက ခေတ်နောက်ကျန်နေသလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျီတော့ပဲ ဖွင့်သုံးတတ်ပြီး ဂျီမေးလ်နဲ့ ဘာကွာလဲ မေးတဲ့သူက ရှိသေးတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ အမြင်တွေက ဒီထက်ပိုပြီး ပွင့်လင်း လာစေချင်တယ်။ ကျောင်းပညာရေးလျှောက်ရင် ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ရမလဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာချင်ရင် ဘယ်ဟာကို ၀င်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးလာစေချင်တယ်။ ခုဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်းတွင် အွန်လိုင်းကနေ ဥပဒေပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူလိုသူတွေအတွက် ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဥပဒေပညာ ဌာနက ဦးစီး၍ ဥပဒေပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Law –DL) သင်တန်းကို ခေတ်မီနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော Web-Based Teaching System (WBTS) ကို အသုံးပြုပြီး Online ဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးမယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ သင်ကြားပို့ချပေးမယ်ဆိုတော့ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာ၊ သွားရလာရလည်း ဒုက္ခမရောက်တဲ့အပြင် ဘွဲ့တစ်ခုကိုလည်း ၁၀ လနဲ့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။ ဒီလို ပညာရေးတွေ ဒီထက်ပိုမို တိုးတက်လာစေချင်နေတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
A place of Attraction in Myanmar
Myanmar isabeautiful country, and Bagan isawell-known city. It is attractive for us because we can see most of the religious relics and buildings. It is also attractive for foreigners because it has ancient culture, arts and crafts.
Bagan is situated on the east bank of the Ayeyarwady in Central Myanmar. It is about5kilometres south of Nyaung Oo. Its area is about 16 square miles. It hasahot and dry climate. It was the capital of the Myanmar kingdom during the Bagan dynasty which was from 11th to 13th Centuries. It became the centre of Buddhism after King Anawrahta attacked Thaton in 1057 and brought to Bagan the Buddhist monk Shin Arahan, the sacred Pitakas and the sacred Pali language. Bagan has always been famous for its ancient pagodas and monuments, and is recognized by the world’s travelers as one of the world’s wonders. The architecture and the artistry of the craftsmen show Myanmar’s wonderful achievement in arts and crafts. The lacquareware of Bagan is still very much in use, and stands asatraditional attraction for all of us. There are also places of interest like the Bagan Archaeological Museum, the Myanmar handicraft shops and many other antique shops. As there are many pagodas, Festivals are held throughout the year.
Today, Bagan has becomeatourist attraction because of its archaeological sites and unspoilt beauty. It is such an attractive place that both natives and foreigners want to visit Bagan more than once.